Mareykanka: Ciidamadeena waxay ka howlgalayaan goobaha saliidda laga soo saara ee Suuriya - BBC News Somali
Mareykanka: Ciidamadeena waxay ka howlgalayaan goobaha saliidda laga soo saara ee Suuriya
Wasiirka gaashaan dhigga Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay iney ciidamadooda ka howl alayaan goobaha saliidda laga soo saara ee ku yaalla dalka Suuriya si ay uga difaacaan werarrada ururka IS uga iman kara.
"Ciidamada iyo dabbaabaadka Mareykanka in deegaannadaasi laga howlgeliyo waxaa looga baahday, si ay goobahaasi gacanta ururka daacish ugu dhicin" ayuu yiri wasiirka gaashaan dhigga.
Madaxweyne Trump inkasta oo uu horay u shegay inuu ciidamadiisa kala baxayo Suuriya, haddana hadalka ka soo yeeray wasiirkiisa gaashaan dhigga ayaa lagu tilmaamay inu muujinaya xaqiiqda dhabta ah uu Mareykanku ka damacsan yahay ciidamadisaa Suuriya ka jooga.
Mareykanku wuxuu dhawaan labaxay boqollaal ka mid ah ciidamadiisa ku sugnaa xadka Suuriya iyo Turkiga ay wadaagaan.
Haddana inuu Mareykanka dabbaabaad ciidan uu u diro dalka Suuriya ayaa lagu tilmaamay iney la mid tahay boqollaal asakari oo dheeraad ah inuu dalka Suuriya uu Mareykanka ka howl gelin rabo.
Dabbaabaadka ciidan uu Mareykanka Suuriya u dirayo ayaa la sheegay iney ka mid yihiin Taangiyo balse faahfaahin intaa dheer kama soo bixin dhinaca Pentagon.
Mowqifka Mareykanka ee ku aaddan dagaalka Turkiga uu ka wado Suuriya
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu mar sii horreysay sheegay in duullaanka uu Turkiga ku qaaday xudday Suuriya uusan ahayn mid lagu qaaday "xudduuddooda", waxa uuna intaa ku daray in Kurdiyiintu oo xulufo la ahaan jiray mareykanka aysan ahayn "malaa'ig".
Mareykanka ayaa cambaareyn xooggan kala kulmaya tallaabadii uu ciidamadiisa ugala baxay dalka Suuriya, waxaana dadka qaar ay ku doodayaan in arrintaasi ay sahashay in Turkigu uu ka tallaabo xudduudda uu la leeyahay Suuriya.
Madaxweyne Trump ayaa warbaahinta u sheegay in mareykanku uusan ahayn "booliska caalamka".
Erdogan oo ka noqday go'aankii uusan ka fiirsanin ee uu ka qaatay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka
Duullaanka Turkiga ma wuxuu bannaanka soo dhigay in Mareykanka aanan lagu kalsoonaan karin?
"Waxaa la joogaa xilligii ciidamadayadu ay dalka ku soo laaban lahaayeen," ayuu yiri Trump.
Xubnaha Aqalka Wakiillada ee baarlamaanka Mareykanka oo ay ku jiraan kuwa xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa cambaareeyay tallaabada uu Mareykanka ciidamadiisa ugala baxay dalka Suuriya.
Turkiga ayaa usbuuc ka hor duullaan xooggan ku qaaday woqooyiga Suuriya si halkaasi uu uga saaro xoogagga Kurdiyiinta ee YPG isla markaana uu deegaannada xudduudda ku dhow uu uga sameeyo aag nabdoon oo uu dejiyo malaayiinta qof ee qaxootiga reer Suuriya.
Hawlgalkaasi Turkiga ayaa billowday ka dib markii madaxweyne Trump uu amar ku bixiyay in dalkaasi laga saaro ciidamada Mareykanka.
Ciidamada milatariga Turkiga oo garab ka helaya maleyshiyaad maxalli ah ayaa billaabay dagaal ay deegaanno u dhow xadka ay la wadaagaan Suuriya uga kicinayaan xoogagga Kurdiyiinta.
Sidey arrintu ku soo gaartay halkan?
Turkiga ayaa kooxda SDF u aqoonsan inay tahay urur argagixiso ah.
Mareykanka ayaa kooxdaas ku taageerayay dagaal ay kula jireen ururka la magac baxay dowladda Islaamiga.
Dowladda Turkiga ayaa dooneysa inay halkaas ka sameyso "aag nabdoon" oo la dajiyo dadka qaxootiga ah ee ka cararay colaadda ka socota Suuriya, gaar ahaan kuwa hadda ku sugan gudaha Turkiga.
In badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ah ayaan ahayn Kurdiyiin, dadka wax dhaliilana waxay sheegayaan inay tallaabadan noqon karto mid saameyneysa qoomiyadda gobolkaas kaligeed dagganeyd, haddii qaxootiga la geeyana laga tiro badan karo.
Tobannaan ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay howlgalka ay billaabeen ciidamada Turkiga, halka in ka badan 160,000 oo ruux ay ka barakaceen aaggaas.
Kurdiyiinta waxay dhanka dhulka ka qaadeen dullaan ay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo xulafada kale ay ka caawinayeen dhanka cirka iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran.
Markii ay meesha ka baxeen IS, xoogagga Kurdiyiinta ayaa la wareegay deegannaadii ay joogeen, waxaana xabsiga ay u taxaabeen kumannaan katirsanaa ururka la baxay dowladda Islaamka.
Wakhti badan kuma aysan qaadanin Madaxweyne Trump in Kurdiyiinta uu dareensiiyay in ay bannaan cidla soo istaageen, taasna ay dhalisay walaac horleh.
Wasiirka gaashaandhiga ee Mareykanka, Mark Esper ayaa beeniyay in ay dayaceen Kurdiyiinta Suuriya. Balse marka la eego sida ciidamada Turkiga ay ugu siqayaan deegannaada ay heystaan Kurdiyiinta iyo bixitaanka askarta Mareykanka, taas waxay ku dhalisay walaac wayn.
Markale Kurdiyiinta waxay noqdeen kuwa lagu dan gaaray, waxayna markale miciin bideen cadowgoodi hore - xukuumadda Dimishiq.
Kurdiyiinta ayaa maalma ka hor ku dhawaaqay heshiis ay la galeen dowladda Suuriya ee uu hogaamiyo Madaxweyne Bashar al-Asad, waxayna ogolaadeen in ciidankiisa ay ku wareejiyaan gobolladda ay maamulayeen oo dowladda Suuriya ay ugu dambeysay sannadkii 2012-ka. Arrintaas waxay guul muhiim ah u tahay dowladda Suuriya, oo durbaba la wareegtay goobihii ay ku sugnaayeen xoogagga Kurdiyiinta.
Haseyeeshee, mas'uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in aysan marnaba oggolaan doonin dagaal toos ah oo dhex mara ciidamada dowladda Suuriya iyo kuwa Turkiga, xilli hadda howlgalka Milatari ee Turkiga uu kasii socdo Waqooyiga Suuriya.
"Arrintan waa mid aan la aqbali karin... sidaas awgeedna ma oggolaan doonno, dabcan", sidaas waxaa yiri danjiraha khaaska ah ee Moscow u qaabilsan Suuriya, Alexander Lavrentyev.
Dadka wax dhaliila ayaa sheegay in go'aankii uu Mareykanka isbuucii lasoo dhaafay ugu dhawaaqay inuu ciidamadiisa ka saarayo Suuriya uu fursad siiyay Turkiga.
Ruushka ayaa taageero ballaaran siiya hoggaamiyaha Suuriya, Bashaar Al-Asad.
Muxuu madaxweyne Farmaajo weli uga gaws haystaa doorashada dadban?
8 Saacadood ka hor
Dowladda Shiinaha oo garan la’ sababta uu hal dabaq u gariiray maanta
Turkiga muxuu ka yiri ciidamada Haramcad iyo Gorgor?
18 Maajo 2021
Sawirrada munaasabadda Ciida iyo Soomaalida
13 Maajo 2021
Sawirro: Madxafka dagaalka Azerbaijan ee khilaafka dhaliyay
Tuulo la waayay oo kasoo dhex baxday haro biyo ah